गाउँमै भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाएपछि स्थानीय हर्षित | Sindhu Jwala
जेठ १, बोडगाँउ (सिन्धुपाल्चोक) । इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर ११ का ७० वर्षीय भुमे माझी ढाड दुख्ने समस्याले धेरैपटक धुलिखेल अस्पताल धाए । नजिकै उपचार गर्ने अस्पताल नहुँदा उनले धेरै पैसा उपचार र गाडीभाडामा खर्चिए । उपचारको लागि बाख्रापाठा र भैंसी समेत बेच्न विवश भुमे अहिले आफ्नै गाउँमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवा पाएपछि निकै दंग छन् । सोही गाउँपालिकाको बोडगाँउमा मेडिकल सेन्टरमा सबै किसिमका बिरामी उपचारका लागि प्रभावकारी बन्दै गएपछि वोर्डगाउँ सिंङ्गैलाई राहत मिलेको छ ।
गाउँपालिका भित्र रहेको अन्य स्वास्थ चौकि भन्दा बिरामी उपचारका लागि प्रभावकारी भएपछि मेडिकल सेन्टरमा स्थानीय धाउन थालेका छन् ।
’बोडगाँउ मेडिकल सेन्टर निर्माण भएकोमा हामी अत्यन्त खुसि छौ‘, स्थानीय सुबिन माझिले सिन्धुज्वालाइ बताए।
मेडिकल स्थापना हुनु अघि सामान्य उपचारका लागि पनि एक घण्टा हिडेर सिपाघाट कित धुलिखेल जानुपर्नेमा अहिले अप्रेशन बाहेकका सबै बिरामी मेडिकल सेन्टरमा आउन थालेको उनले सुनाए । आकस्मिक ठुलो रोग लाग्दा समेत एम्बुलेन्समा धुलिखेल हस्पिटल जान ४ देखि ५ हजार सम्म भाडा लाग्ने गरेको उनले दुःखेसो पोखे । उपचार विना गरीब सर्वसाधारण पैसाको अभावले अकाल मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेको उनले सुनाए । उनका अनुसार अहिले गाउँमै सुविधा सम्पन्न मेडिकल सेन्टर निर्माण जय नेपाल संस्थाले गरेको हो ।
गाउँमै स्थापना भएको सुविधा सम्पन्न मेडिकलबाट आधुनिक तरिकाबाट उपचार पाएकोमा स्थानीय निकै खुशी छन् । बाक्लो घना बस्ती रहेको बोडगाँउमा स्थानीयको माग अनुसार मेडिकल सेन्टर स्थापना गरिएको जय नेपाल संस्थाका प्रतिनिधि एवम् संस्थापक सदस्य बासुदेव न्यौपानेले सिन्धुज्वालालाई बताए । उनका अनुसार सेन्जा कोन्न्फनी संस्था र इटालियन अलवर्टो लुज्जिको संयुक्त पहलमा उक्त बोडगाउँ मेडिकल सेन्टर २०७३ षौस १९ गते स्थापना भएको हो । जय नेपाल संस्थाले ७२ सालको महाभुकम्पका बेला स्थानीय स्तरमा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा गएर शैक्षिक सुधार कृषि सम्बन्धी काम गर्दै आएको उनले सुनाए ।
’७२ सालको महाभुकम्पको बेलामा समेत वोर्डगाँउको अल्पसंख्यक जातिमा पुगेर सहयोग पु¥याएको उनले बताए । हाल उक्त मेडिकल सेन्टरले उचित व्यवस्था सहित अत्याधुनिक तरिकाबाट उपचार गरिने तथा न्युन शुल्कमा बिरामी उपचार गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार मेडिकल सेन्टरमा दैनिक ओपिडि तथा आकस्मिक बिरामी जाँच तथा उपचार गरिन्छ । त्यस्तै बिरामी भर्ना, प्याथोलोजि दिसा, पिसाब, रगत जाँच, ईसिजि, अल्ट्रासाउन्ड एक्सरे, प्रजनन स्वास्थ तथा परिवार नियोजन परामर्श प्रस्तुति तथा मातृशिशु स्वास्थ आदि सेवाहरु विशेषज्ञ डाक्टरहरुद्वारा गरिने उनले सुनाए ।
This entry was posted in स्थानीय तह, इन्द्रावती गाउँपालिका, समाचार, जीवनशैली / स्वास्थ्य. Bookmark the permalink.
वार्ता टुङ्गियो, आन्दोलन बन्द गर्ने र प्रतिवेदन समिति बनाउने गरी दुईबुँदे सहमति